FOTODRAFITRASA : Hananganana Mozean’ny vakoka sy ny haino aman-jery etsy amin’ny ORTM
12 taona aty aoriana, hiverina hitsangana amin’ny endrika vaovao manara-penitra ny tranoben’ny ORTM sy ny haino aman-jerim-panjakana TVM sy RNM etsy Anosy. 2 novembre 2021
Hanangana fotodrafitrasa ho mozean’ny vakoky ny haino aman-jery na “Havoria” eny an-toerana ny Fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina. Nisy nandoro ka kila hotohoton’ny afo nandritra ilay Alatsinainy mainty, ny 26 janoary 2009 ity toerana ity. Tsy nieritreritra hamerina izany ny mpitondra teo aloha saingy hanao ho laharam-pahamehana izany ankehitriny ny Minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina.
Tafapetraka tamin’ny fomba ofisialy ny alarobia 27 oktobra 2021 lasa teo ny vatofototra ho mariky ny fanombohana ny asa fananganana ny “Auditorium” sy “Musée de l’audiovisuel” na antsoina koa hoe : “Mozean’ny vakoky ny haino aman-jery”. Nampitondraina ny anarana hoe : “Havoria”, izay fandaharana ara-kolontsaina nalaza tao amin’ny TVM ity toerana ity. Ahitana efitrano maro ary hisy toerana malalaka mahazaka olona hatrany amin’ny 700 ny fanorenana vaovao hatao. Nanatrika ary nanome voninahitra ny lanonana ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, teo ihany koa ireo filohana andrimpanjakana nahitana ny filohan’ny Antenimieran-doholona sy ny Antenimieram-pirenena, ireo loholona, ireo solombavam-bahoaka sasany, ireo Masoivoho vahiny sy ny solontenan’ny rantsana avy amin’ny Firenena Mikambana, ankoatra ireo olo-manankaja samihafa.
Ny teny hoe « Havoria » dia teny avy any amin’ny faritra Asimon’i Madagasikara iny. Manambara ireo fivoriambe iarahan’ny mpianakavy sy ny mpiara-monina, na an-kasoavana na an-karatsiana ny foto-kevidehibe fonosin’ny teny hoe Havoria, indrindra fa ny any amin’ny faritra Atsimo nipoiran’izany teny izany. “Nosafidiana manokana ny eo amin’ny tokotany malalaky ny ORTM hametrahana ny fotodrafitrasa manara-penitra noho ity toerana ity manana ny tantarany manokana teto amin’ny firenena”, araka ny fanazavan’ny Minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo.
Tsiahivina fa teo amin’io toerana hametrahana ny « Havoria » io fahizay no nanaovan’ireo mpitantana ny firenena kabary goavana hanamarihana hetsika iray lehibe. Nifandimby teo amin’izany toerana izany avokoa ireo karazana endri-danonana samihafa, raha tsy hitanisa ohatra ny hetsika goavana tamin’ny fampiainana ny mpiray tanindrazana ny lalao CAN 2019 nandraisan’ny ekipam-pirenena malagasy anjara, ka nahatonga ny ekipam-pirenena nahavita nanandratra ny voninahi-pirenena mlalagasy. Nifanindra an-dalana amin’ny fankalazana ny andro maneran-tanin’ny harem-bakoka momba ny haino aman-jery (Journée mondiale du patrimoine audiovisuel) isaky ny 27 Oktobra tahaka io daty hanombohana ny asa fananganana ity fotodrafitrasa goavana ity. Marihina amin’izany fankalazana izany indrindra ny fanentanana ny maha zava-dehibe ny fitahirizana ny raki-peo sy ny raki-tsary ary ireo fitaovana ho an’ny haino aman-jery nifandimby mba ho harem-bakoka. Nambaran-dRamatoa Minisitra nandritra ny lahateniny, fa “tafiditra ao anatin’ireo tetikasa novolavolain’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina miainga amin’ny « Nouveaux Projets Emergents » (NPE), izay tsy maintsy ataon’ny departemanta minisiterialy rehetra, ny fananganana ny “Auditorium Havoria”. Tanjona, hoy ny Minisitra, amin’ny fananana fotodrafitrasa tahaka izao ny fisian’ny toerana hitehirizana ireo harem-bakoky ny haino aman-jery, ny fananana ihany koa toerana manana taotrano kanto sy manaraka ny fenitra takina amin’izany. “Maro be ny firenena any ivelany manana izany mozean’ny haino aman-jery izany saingy tsy hita taratra izany eto Madagasikara. Ny fisian’ireny anefa no hahafahana mandrefy ny fandrosoana. Tsara ho fantatry ny taranaka mifandimby ny zava-nisy niainan’ny mpiasan’ny haino aman-jery tamin’izany. Tsara ho fantatra koa ny fitaovana nampiasana hahafahana manao jery todika sy miabo hatrany amin’ny zavatra atao”, hoy ny fanambaran’ny Minisitra
Mbola maro be ireo vakoka nampiasaina tao amin’ny haino aman-jerim-panjakana nampiratiana eny an-toerana nandritra ny fametrahana ny vatofototra. Na efa may sy kilan’ny afo nandritra ny fahamaizan’ny haino aman-jery aza mantsy ireny dia nisy hatrany ireo mpiasa nahatahiry izany ka namerina izay voatahiriny tany an-trano ho vakoky ny haino aman-jerim-panjakana. Hanao antso avo amin’ny rehetra izay manana tahiry tao amin’ny ORTM mahakasika ireny fitaovana sisa tsy may ireny koa ny Ministera hamerina izany eny an-toerana. “Iantsoana ny rehetra izay manana na mahatahiry. Azonareo atao ny manatitra ireny fitaovana ireny aty amin’ny ORTM. Rehefa vita ity toerana ity dia hampiratiana ato avokoa ireny ary homarihina manokana ny anaran’ireo nahatahiry sy nanolotra izany ho an’ny ORTM”, hoy kosa ny fanazavan’ny tompon’andraikitra.
Manangana sy manorina
Ankoatra ny voalaza etsy ambony, hisy ihany koa ny efitrano mifampitohy ahafahana mampiranty ireo harem-bakoky ny haino aman-jery, ny “salle de projection”, ny toerana fisakafoana isan-karazany, birao samihafa, toerana fanaovana famerenana mozika sy dihy, ankoatra ny toerana manokana ho an’ireo olo-manankaja. Haharitra 5 volana ny fanamboarana ny asa rehetra araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra misahana ny asa. « Anisan’ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanorenana sy fanarenana foto-drafitrasa manara-penitra mifandraika amin’ny filàn’ny vahoaka ary holovain’ny taranaka. Isika no tena manorina sy manangana ny rava ary manangana izany ho lovan’ny taranaka indray », hoy ny Filoha Andry Rajoelina. Hanamarika tantara vaovao ny fametrahana ity fotodrafitrasa goavana ity, hoy hatrany ny Filoham-pirenena.